Feature - Part 43
लिगकाे ह्याट्रिककर्ता पुलिस यसपटक लय भेट्टाउन सक्ला ?
एक समय थियो, नेपाल पुलिस क्लबसँग खेल्न प्रतिस्पर्धीहरु डराउँथे । तर यो इतिहास भइसकेको छ । कारण, पछिल्ला केही वर्ष पुलिस क्लब संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रियो । सिनियर टिमका खेलाडीको उमेरका कारण प्रदर्शन खस्कँदै गयो भने युवा खेलाडी परिपक्व…
बंगबन्धु खेल्न लागेकाेप्रति ए डिभिजनका क्लब अाक्राेशित
नेप्लेज, १० असाेज । एन्फाको नेतृत्व सम्हाल्न नयाँ कार्यसमिती आएसंगै पहिलो निर्णय हो, ए डिभिजन लिगको मिति घोषणा । तर संसार कहि अभ्यास नभएको रेलिगशेन विनाको लिग गर्ने भएपछि यसको ब्यापक विरोध भयो । फिफाको आग्रहपछि क्लबहरुले, फुटवलको माहोल…
हाेटेलकाे पार्किङबाट सुरू भएकाे यात्रा वर्ल्ड दी बेष्टसम्म
नेप्लेज, ९ असाेज । फिफाले प्रदान गर्ने बर्षको उत्कृष्ट खेलाडीमा दुई स्टार खेलाडी लियोनल मेसी र क्रिस्टियानो रोनाल्डोको एरालाई तोड्दै क्रोयसियन स्टार लुका माेड्रिच यसपटकको फिफाको दी बेष्ट प्लेयर बन्न सफल भए । यसपटकको फिफा अवार्डमा प्रायः…
श्रीलंकन क्रिकेटकाे अवस्था, १८ महिनामा ५ कप्तान परिवर्तन
श्रीलंकन राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको छनोटकर्ताले कप्तान एन्जेलो म्याथ्युजलाई सो पदबाट हटाएका छन । १० महिना अगाडी श्रीलंकाको कप्तानीको जिम्मेवारी पाएका म्याथ्युजले छनोटकर्ताले कप्तानीबाट हटाएका हुन । उनको स्थानमा टेष्ट क्रिकेटका कप्तान दिनेश…
‘ए’ डिभिजन लिगमा मछिन्द्रको लक्ष्य ‘मिड टेवल’
नेप्लेज, ७ असोज । पाँच वर्षको अन्तरालपछि आगामी असोज १३ गतेदेखि आयोजना हुन लागेको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा मछिन्द्र क्लवले अंकतालिकामा मध्यतिर रहेर लिग टुंग्याउने लक्ष्य लिएको छ । लिग सुरु हुँनु ए साताभन्दा कम समय बाँकी छ ।…
एशिया कप छनाेटमा गुमाएकाे अात्मविश्वास फर्काउने माध्यम
टी–२० विश्वकप छनौट अन्तर्गत इस्टर्न सब रिजनको प्रतियोगिताका लागि नेपाली टिम यतिबेला तयारीमा ब्यस्त रहेको छ । मलेसियामा हुने प्रतियोगिताका लागि पहिलो चरणको बन्द प्रशिक्षणमा १८ जना खेलाडी छन । मलेसियामै अघिल्लो महिना भएको एशीया कप छनौटमा…
जाऊँ शङ्खरापुर प्याराग्लाइडिङको मज्जा लिन, शूल्क रू ५५०० मात्र
-कुमार चौलागाई/आदित्य दाहाल- काठमाडाैं, ५ असाेज । काठमाडौँको उत्तरपूर्वी क्षेत्र शङ्खरापुर नगरपालिका–२ स्थित देउरालीमा सञ्चालित ‘शङ्खरापुर प्याराग्लाइडिङ’ले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षण गरिरहेको छ । पर्यटन पूर्वाधारको रुपमा लिइने…
महिला फुटबलमा लगानी बढाउँ, अनि नतिजाको आशा गरौं !
नेप्लेज । एसीसी यू–१६ महिला च्याम्पियनसिप छनौटको समूह इ अन्तर्गतका खेलहरु अहिले काठमाडौंमा भइरहेको छ । यो समूहमा नेपालसँगै फिलिपिन्स, मलेसिया, म्यानमार र सिरिया छन् । समूहको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले शुक्रबार म्यानमारसँग ११–१ गोलको…
मुस्ताङमा साहसिक खेल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरिने
मुस्ताङ, ५ असोज । नेपाल सरकारले हिमाली पर्यटकीय जिल्ला मुस्ताङमा साहसिक खेल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । घरपझोङ गाउँपालिका–२ मार्फामा बिहीबार शुरु भएको ‘४८आैं थाक खेलकूद प्रतियोगिता’ उद्घाटन कार्यक्रममा युवा तथा खेलकूदमन्त्री…
पहिलो दोहोरो शतक बनाउने सचिन होइनन्, अरु को हो त ?
काठमाडौं, ४ असोज । क्रिकेट भन्ने वित्तिकै तपाई हामीलाई यो खेल पुरुषहरुले मात्रै खेल्ने हो जस्ता लाग्छ । तर पछिल्लो समय विश्व क्रिकेटमा महिलाको प्रदर्शन पनि सम्झन लायक छन् । अझ भनौ सचिन तेन्दुलकर एक दिवसीय क्रिकेटम दोहोरो शतक लगाउने पहिलो…